Waa imtixaan Nolosha Adduunyo |BUUG| - Qalinkii Muxammed
Waa imtixaan Nolosha Adduunyo |BUUG|
Sida magaca ku xusanba buuggani wuxuu kusaabsanyahay murugada qofka bini aadmiga ahi murugoodo inta uu noolyahay iyo sababaha keena, intaa waxa la socota siduu qofku uga bixi lahaa haday murugo ku habsato.
Sidaynu badankeenu ognahay murugadu waa xanuun ku dhaca bini aadmiga sida xanuunada caadiga ah oo kale, hadii maanta shil aad gasho tusaale ahaan oo dhaawac jidh kusoo gaadho markaaba waxaa laguula cararayaa dhakhtarka si xanuunka ku haya lagaaga daweeyo. Murugadu laakiin way ka duwantahay iyadu malaha kiniin ama irbad la qaato oo markaaba kaa jabinaysa (ileen waxay ku dhacdaa waa nafta bini aadmiga ahe), waxay u baahantahay dawo kale oo ah in qofka murugaysani marka hore aanuu qarsan xanuunka haya ugu yaraan naftiisa iyo allahii abuurtay aanuu ka qarsan ugu badnaana dadka wax garadka ah ama dhakhaatiirta cilmi nafsiga ee uu caawimo ka heli karo qofka dhibanaha ahi.
Waxaa badanaa dhacda in qofku ka xishoodo inuu sheego xanuunka haya isagoo ka baqaya inay dadku ku sheekaystaan hebel waxbaa si ka noqday ama waa qof jilicsan oo wuu murugooday IWM oo dadka caqliga liiti yidhaahdaan. Boqolkiiba sideetan (80%) dadka soomaalida ahi waxay umaleeyaan inay murugadu tahay xanuun ceeb ah oo laga khajilo taasina waa arinta keentay inay dad aad u badani qarsadaan xanuunkan. Ma’ogtahay akhristoow in waxaad qarsataa ku qarsadaan, ma’ogtahay akhristoow in isku buuqa iyo fikirka oo kugu bataa kugu keeni karo xanuuno aad halis u ah!
Anigoo haba yaraatee ka hortagaya fikirka qaldan ay dadkeenu aamineen ayaan waxaan qoray buugan si uu u helo qofku caawimo, isagoon cidina ogaan xanuunkiisana isaga dawayn karo, taas oo ah inuu akhriyo buuggan iyo kuwa la midka ah.
Buuggan waxaad ka heli doontaa siyaabooyin badan oo aad uga bix karto fikirka iyo cidhiidhiga naftaadu dareemayso ee aad la dahay meel aad uga baxsato. Buuggan waxaa ku qoran sheekooyin, waxaan sheekooyinka usoo qaatay marka uu qofku murugaysanyahay wuxuu moodaa inuu kaligii dhibaatadu haysato laakiin wuxuu xasuusanayaa marka uu akhriyo sheekooyinka inay jiraan kuwo la mid ah iyo xataa kuwo kasii liiti!
Waxaan rajaynayaa inuu buugani kaa caawin doono dhibaatooyinka iyo murugada ku haysa, illaahayna waxaan kuusoo waydiinayaa caafimaad iyo nolol farxadle.
“WAXAAN FARXAA MARKAAN QOF DHIBAATAYSAN OO MURUGAYSAN KA FARXIYO HABA YARAATEE”
~Muxammed Maxamuud Ismaaciil.
Halkan Riix si’aad u dalbato Buugga.
3 Replies to “Waa imtixaan Nolosha Adduunyo |BUUG|”
waa buug fiican
Sahra Yusuf says:
Buuggan waan iibsan doonaa, mahadsanid walal
Ikraan cumar says:
Walal Buugan waa Buug anigu aad ugu baahnahay, Sideen ku heli karaa fadlan?